Zvita 2, 2016 By StellaMarice Leave a Comment
Best Christmas Gifts Ideas:Christmas This, vachipemberera mutambo pasina kupa zvakanakisisa Christmas zvipo mazano vaunoda kuti zvisiri kuva chakanakisisa. Takaita akauya mazita zvakanakisisa Christmas zvipo 2016, Enda musoro uye Sarudzai kana kupfuura shamwari dzako,amai, baba, murume, mudiwa, musikana uye mhuri chete kungotaura mishomanana.
For Christmas zvipo nemazano mukomana,WE kunge anhonga zvipo kuti zvichaita ichakushamisa vaya kuzvigamuchira. Kana usingagoni kuita kumba, ipapo uchatuma rudo rwenyu chipo anogona kukosheswa kwenguva refu. Kisimusi yakanaka!
1) Jaybird Wireless MAKARALI USB Headset X2 Sport (Best Christmas Gifts Ideas)
Jaybird Makaralı Headset :Best Christmas Gifts Ideas 2016
For Christmas zvipo pfungwa wake,you can send your loved one this X2 Jaybird Wireless Bluetooth headset.It is a beautifully designed sports headset for hands-free enthusiasts. Unoshanda kukupa yepamusoro ekuteerera Via MAKARALI USB, zvikurukuru Darika isina mumhanzi panze. Zvinogona kugara kusvika 8 hours long playing music as well as making and receiving calls, izvo unogona kutarisa kushandisa kure kudzora. headset uyu unosanganisira yakasimbiswa pamusoro / pasi nzeve ikodzere kusarudza uye anouya aine ziya uchapupu garandi kwoupenyu hwose. Jaybird anopa zvakawanda nenhumbi vane pamahedhifoni izvi, akadai patented Akachengeteka-Fit nzeve zvimbi, ndinorova waya uye waya utariri clip, kukweshera-zvakakodzera silicone mitambo kutakura bhegi, Comply premium sports memory foam for ear plugs and silicone earbuds.
For Christmas zvipo nemazano mukomana,the SmartWatch Samsung Gear Fit is a 24/7 wearable Gadget nokuti zvinoshingaira mararamiro. It comes with always-on activities to follow any track of your activity which can last all day. Unogona orisunga kwenyu uchinzvera pakufamba uye vachiri kuchengeta mahara chero mhando kukuvadzwa sezvo totaura neguruva uye nemvura kudzivirira (IP67). Hazvina garika, Zvinokosha zvakaisvonaka uye chiedza. Izvi yokurinda akangwara rine curved Super AMOLED kuratidzwa. Pane munhu gym ikurudziro kuti unouya pamwe kwemwoyo Switch. Izvi yokurinda akangwara kunyanya mabasa kukupa-chaiyo nguva zano, kutsigira uye kuchakukurudzira kuti kubudirira kugwinya zvinangwa zvako. Akakubvumidza kuti kudzora nyore zvinhu zvaionekwa akadai anokurumidza kupindura mashoko, dana kurambwa mashoko uye okuzvidzivirira.
3) Tile (Gen 2) – Phone Finder. Key Finder. chinhu Finder
Tegel (Gen 2) – Phone Finder. Key Finder. Item Finder: Best Christmas Gifts Ideas 2016
Best Christmas Gifts Ideas :Tile is a Bluetooth-tracker and a user-friendly application that helps you find important things that you can not lose easily, akadai runhare, makiyi, chikwama, mukwende, mahwendefa, Camera, nezvimwewo. Anwendung ichi anoita basa rayo panyaya mumasekonzi . All unofanira kuita kugadzirisa Tile mumwe chinhu kwenyu uye localize pamwe ruzha, panguva pamberi wekupedzisira kuvazivisa nzvimbo pamepu. You can also indicate “Kurasika zvinhu pamusoro Anwendung” uye kugamuchira yambiro kana chinhu chinowanikwa. With Tile, zvinoita here kuti asike vakarasika chindori foni yako, kunyange kana chiri akanyarara. Hazvina Zvinokosha zvakaisvonaka uye anouya ane chisimbiso, mvura nemishonga nyaya, dziviriro nekuti kunyange riri rakaipisisa zuva kuchinaya. Mupepa vakurukuri duku kuti vazopa 90 Decibel ruzha. Izvi zvinoita kuti anzwike, kunyange kana munhu dzimba shoma kure kana akaisa pasi zvimwe nemurwi zvinhu.
Best Christmas Gifts Ideas: Kana uri refu ndege rwendo, rwendo nenzira, kana nzvimbo uchida mudziyo yako mutoro refu, ipapo Jackery Giant + inofanira kuva Muponesi wako yakanaka. Zviri pakukura kugona inotakurika mundiro zvenyika uye zvokunze matochi. Ndicho chinhu chaizvo yakakwirira kugona inotakurika mundiro hunosanganisira mbiri USB zviteshi kuti vakawanda mano kubhadharisa achichengetedza. The zvemichina anoshandisa Panasonic kuti Grade A Li-Ion polymer rwokugadzira, yokumutsiridza pfungwa zvinoda zvinopfuura 500 nguva. It ane rechargeable inokwana 12,000 naRaama. Hazvina yakasimba, lightweight and comes in different colors.This gadget could be suitable for Christmas zvipo nemazano musikana
5) FiftyThree Digital chinyoreso(Best Christmas Gifts Ideas)
Penzura kubudikidza FiftyThree Digital chinyoreso paiPad, iPad Pro uye iPhone
Christmas zvipo nemazano murume:FiftyThree Pencil ndiyo nzira itsva yakagadzirwa chinyoreso unobatanidza kuna iPad uye iPhone namano. Asiwo anoita kuti mapepa kubudikidza FiftyThree, bereka, tswanda bhodhi, Microsoft OneNote, Raid Mobile, nevamwe. The ideal surface pressure is the unique point of the pencil which is formed so as to create the exclusive settings that provide the lines of different sizes. It ine yakavakwa muna chokudzimisa unokubvumira kurishandisa pamwe chete pafiripi kure. Kushandisa chigunwe chako, unogona chechetere ine micheto nokubatanidza ruvara papeji. Unogona kuisa ruoko rwenyu pamusoro chidzitiro uye kutanga kunyora chero pakona, pasina kugadzwa kana calibration. Anouya aine USB rechargeable matochi, zvimwe muromo, zvimwe chipfudziso uye rinobva snap.This aigona kuva yakanaka Christmas gifts ideas for husband
6) Jam HX-P930 Trance frame Wireless Nomukurukuri Light Show
Jam HX-P930 Trance Plus Wireless Nomukurukuri Light Show
Pindura dzenyu Kushanya zvakananga kubva muchiyeverwa yako ndinoiitawo Wireless Light Show Mutauriri pamwe speakerphone basa, kuburikidza wirelessly kuti MAKARALI USB mudziyo ari 30-rutsoka siyana. Hazvina rechargeable uye anopa kukwira 10 maawa vanomuda paunenge pamusana 3 maawa. Pane Chiedza Show nezvechisarudzo kusarudza synchronize kubva 36 Akatungamirira Zvirongwa chiedza bato mimhanzi yako. It ane inzwi nokukurumidza chinhu kuti basa raro somunhu unobva, nokuchinja, nezvimwewo. Ndicho mudziyo yakagadzirirwa kushandiswa mumugwagwa saka chokunze urongwa mukurukuri anoratidza rabha kudzivirira. JAM Trance Plus is durable and very portable.This can be a perfect match for christmas gifts ideas for your sister.
7) Ihome iBN43BC MAKARALI USB redhiyo
Ihome iBN43BC MAKARALI USB redhiyo: Best Christmas Gifts Ideas 2016
Batanidza wako MAKARALI USB enderana mudziyo iBN43BC uye Wireless kumhanyira digitaalinen mumhanzi. Ihome iBN43BC MAKARALI USB redhiyo munhu zvizere zvakagadzirirwa nightstand ekuteerera marongedzero yepamusoro ekuteerera. It kunouya vakurukuri maviri akajeka kurira. Unogona kuisa kumhanyira makaseti okuzvidzivirira vane mudziyo uyu kana tivete. Ane redhiyo karedhiyo pamwe shoma ekuteerera pamwe chinjika treble, pachiyero uye bass chidhiraivho. Unogona rinobatanidza Ihome iBN43BC MAKARALI USB redhiyo aine mudziyo une NFC zvigadzirwa. Unogona yakajeka maoko-akasununguka zvinoda vane speakerphone Maungira mabasa. Unogona zvakare namano kuti hahuenderani kubatsirwa ebetsero chiyamuro kubatanidza MAKARALI USB. It une USB chengarava inogona undoraira hwezvekukurukurirana Mobile apo achitamba.
Christmas zvipo nemazano naamai:The Kindle-itsva zvose 6 “anouya aine musono touchscreen vanoratidza iyo runotibatsira kudzvokora kunokonzerwa chezuva uye anoita kuti zvive nyore kuti kuverenga pamberi pameso enyu. You can charge it once and use it for weeks as it has a high lifespan battery. It is lighter than a paperback and can store thousands of books.This device can be a perfect match for Christmas gifts ideas for mom
Best Christmas zvipo pasi 20:Blu Studio-selfie smartphone chinhu kwokuvandudza SIM smartphone pamwe Android 5.1 Lollipop uye vazhinji anoyevedza nokurondedzerwa. Uyu ane chakazarurwa GSM runhare. It ine 1.3 GHz Quad Core Mediatek 6580 processor noruoko Mali-400 GPU. It ane 5-padiki IPS hwakaratidzwa, 5-megapixel car-kufunga chikuru kamera pamwe akatungamirira nokupenya uye car pfungwa 5 megapixel yechipiri kamera wakadzoka akatungamirira mbaravara. foni iri nepokuongorora Blu Final Touch Software. Chinhu 4G HSPA + (850/1700/1900/2100), GSM quad-band smartphone.This can be great for zvakanakisisa Christmas zvipo pasi 20
10) Rushaya UP3 Heart Rate, Activity + hope Tracker, Ruby Cross (Tsvuku)
Rushaya UP3 kubudikidza Pulse: Best Christmas Gifts Ideas 2016
Christmas chipo pfungwa vakaroorana:Monitor mwoyo wako utano yose zuva pamwe UP3 kubudikidza rushaya. Ndirwowo anobudirira hope uye basa Tracker, chamber kwenyu Workout hurumende uye macalorie iwe kupisa rimwe zuva. Unogona kuwana rutsigiro yakakwana kubva Smart Coach kuita sarudzo noutano rimwe zuva uye chido unofanira kuzadzisa kugwinya zvinangwa zvako. Dzidza kuziva zvakaita hope dzako sezvo Advanced Kurara Tracks yakarurama hope mumatanho REM, Light uye Deep. bhendi Your vachangoerekana kuona kana waenda kunorara. Pane Smart Alarm iyo chinyararire kupupudza iwe panguva yakanakisisa nguva hope dzako kutenderera. It ane matochi upenyu 7 mazuva.
Saka unodei kupa sechipo vadiwa vako Christmas ichi? sezvaunoita mutsanangudzo. Uyewo tarisa mazita aya pazasi kuti nyore nzvimbo uye mamwe zvakanakisisa Christmas zvipo pfungwa.
Krisimasi chipo pfungwa vakaroorana
Christmas zvipo nemazano mukomana
Christmas zvipo nemazano naamai
Christmas zvipo pfungwa wake
Christmas zvipo nemazano murume
Filed Under: Christmas Gifts Tagged With: zvakanakisisa Christmas zvipo pfungwa, zvakanakisisa Christmas zvipo pasi 20, zvakanakisisa Christmas zvipo pasi 50, christmas gift ideas 12 year old boy, christmas gift ideas 15 year old boy, christmas gift ideas 7 year old boy, christmas gift ideas 8 year old boy, Krisimasi chipo pfungwa vakaroorana, christmas gift ideas on a budget, christmas gift ideas tweens, Christmas zvipo pfungwa DIY, Christmas zvipo nemazano mukomana, Christmas zvipo pfungwa wake, Christmas zvipo nemazano murume, Christmas zvipo nemazano naamai, christmas gifts ideas homemade, christmas gifts ideas pinterest, christmas gifts ideas to make
Mbudzi 16, 2016 By StellaMarice Leave a Comment
Best Christmas zvipo hanzvadzi:Rinonyatsooneka nguva yegore iwe nemhuri yako ndiyo mwaka Christmas. Kunyange kana uchiziva mhuri yako sezvakaita kumashure rwako, Kazhinji zvingava zvakaoma kufunga chii kuti vavabatsire kuti nokuzviratidza sei zvikuru ivo anorevei kwauri, kwete pamusoro dzemazororo, asi nguva dzose. Imwe hanzvadzi munhu ari pedyo chaizvo uye nguva dzose kupfuura shamwari. Iye kazhinji zvakaoma kufadza uye ichi ndicho chikonzero nei iwe nguva dzose kuwana zvakaoma kuziva kuti vawane hanzvadzi yangu Christmas. Below riri kuita zvinhu zvizhinji-siyana, izvo zvichakubatsira mhinduro yomubvunzo uyu vakaoma .
Chii Kuti Get Hanzvadzi yangu For Christmas 2017 ?
1. Fashion Wallet(Christmas zvipo hanzvadzi)
Mumwe wangu yakanakisisa kufarira nokuda Christmas zvipo hanzvadzi uyu pingi yakanaka mufashoni wallet.When wako Style hanzvadzi savvy ari pamusoro kutenga spree, iye Zvichada vanoda nzvimbo yakachengeteka kuchengetedza mari uye makadhi ake. Izvi yakanaka Cedar Street tavy chikwama kubva Kate Spade New York achaita kukodzera muchikwama kwake zvakakwana. Pasinei dzayo duku saizi, ichi 100 muzana chaiyo nedehwe chikwama yepasi pitikoti muhomwe pamusoro mukati nekunze, ndinoiitawo nzvimbo pasina makadhi shoma kuti vasere. chikwama ichi kuuya ndiye-ruvara matatu sarudzo: Black / hurungudo, Ndarama Yakazara Nezvinhu Snapdragon.
2. masa Handbag (Christmas zvipo hanzvadzi)
Saka chii kana wako Kugadzira nesisi atova ane chikwama huru? Zvakadini chinhu kuutakura muna? Izvi Rebecca Minkoff masa handbag ndiyo akakwana kukura pa 9 masendimita kubudikidza 5 masendimita, uye ngaasungirire yayo zvinogona kugadziridzwa sezvo pamusoro-the-pamafudzi muchinjikwa muchipfuva; unogona kubviswa saka hanzvadzi yako unogona kurishandisa sezvo anokwezva batira nokuti mukupera nousiku pamusoro muguta.
Nokuti nyanzvi mumitambo Sister:
3. Yoga Sports Bag (Christmas zvipo hanzvadzi)
Kana munin'ina wako nyanzvi mumitambo zvinotora rwendo kuna yokurovedza muviri, iye ane mugove kutakura. Izvi naka kushanda mukwende ane nzvimbo zvose zvaaida, kunyange wake Yoga bonde! Zvakananga rikagadzirwa Manduka kuti tigutse zvido Yoga uye pilates enthusiasts, ichi Go Free 2.0 mukwende chinoratidza mberi ZIP muhomwe anofambirana munhu 26 padiki yakafara Yoga bonde, anokosha, kadhi uye foni nezvikamu, uye hombe chikuru nzvimbo yake water bottle, tauro uye kunyange tablet.
4. Tennis Racquet(Christmas zvipo hanzvadzi)
Kana munin'ina wako ari Tennis vanonyanyisa, Ndinofunga mumwe Christmas zvipo (naye) hanzvadzi sikana wakaramba be this one.Kunyange zviri Christmas nguva, uchava hanzvadzi yako uchivasuwa mwedzi zhizha paunenge chipo naye ichi Wilson Six. Mumwe kuruka Effect Tennis racquet. The racquet anouya ari itsvedze, nyanzvi mumitambo matsvuku ruvara uye inobudisa chaiwo vibration zvinoderedza mubato. Its kuruka Zvazvakaita zvemichina anopa ichi racquet yokuwedzera masendimita pamusoro dare uye imwe kugabhuka ari mutambo. Chaitevera nokuti nesisi yenyu, Wimbledon!
5. Mushini wekusona(Christmas zvipo hanzvadzi)
Nokuti Crafty Sister:Pasinei hanzvadzi yako chete muchizadzwa chatangwa kusona kana ari kare tsaru ruoko, ichi incredible Hama CS6000i wokusonesa uchava wake stitching kure kwemaawa. Izvi akangwara wokusonesa kuzvirumbidza 60 yakavakwa muna stitches, akawanda bhatani mugomba zvitayera, mumwe jamhu nemishonga bobbin uye shanduka nokukurumidza masimba. Ruoko anewo mupanda wako hanzvadzi zvose kusona zvishongedzo. Pamwe chete zvinhu izvi zvikuru zvinhu, munin'ina wako kuwana muchina uye Musono pakuvira nomukombiyuta LCD kombiyuta vanoratidza nechemberi muchina, uye iye anogona kunyange kusona risingabhadhari chiedza kunokwana yakavakwa muna kusona chiedza.
6. Sketching uye Drawing Set
Uyu ndomumwe wangu yakanakisisa mazano nokuda christmas gifts for my sister:Kana fungidziro yako hanzvadzi apererwa mhuka ine unyanzvi pfungwa, iye achada kuwana navo pana papepa nokukurumidza sezvinobvira. Hapana nzira nyore kuchengeta wake unyanzvi rinopiwa paruoko kupfuura Large ichi 134 chidimbu iwe wakaiswa kubva Royal & Lang nickel. Yakatarwa zvichakugadzirira hanzvadzi yako ruvara mapenzura, zimbe tsotso, Wedding pencil, kubatane nekuita stumps, vanokanya-unogona chokudzimisa uye zvakawanda. Kunosanganisirawo chiduku mannequin. Yose yakatarwa anouya inobwinya zvitatu Tiered huni nyaya dehwe Kutarira Chibato.
Sketching uye Drawing Set
7. Around-Ear pamahedhifoni
Bose izita kuti kare rakafanana nerokuti chemhando yepamusoro muna Headphone uye mutauri rwokugadzira. SoundTrue izvi kumativi nzeve Style pamahedhifoni vachapa hanzvadzi yako mudiwa rokumavirazuva nyaradzo okuyeuka furo pamakusheni apo kuendesa yakajeka uye zvakasikwa kurira kwaari nzeve. The headset kunyange unosanganisira yakavakwa muna maikorofoni dzokushandisa Kushanya. The pamahedhifoni akauya rwokudzivirira nyaya Stylish uye anowanika namavara mana wepanguva.
Nokuti Music Anoda:
Another dzinonakidza Christmas zvipo hanzvadzi the Guitar. A best seller this year, ichi Jameson gitare ndiyo akakwana chipo kuchengeta hanzvadzi yako jamming. Pasinei wayo chinyakare uzere kadikidiki Guitar chimiro, hapana yekare zvechinyakare pamusoro gitare ichi wayo rima yebhuruu dzinokaroparuka kumugumo, akavaka-mune equalizers uye dzakaonda-mutsetse magadzirirwo panguva chete masendimita matatu funga. Nemhaka yayo yakavakwa-mune pickups, kwenyu rockin’ nesisi anogona kuridza plugged kana zvakazara acoustic.
Nokuti Glitz uye Glam Sister(Christmas zvipo hanzvadzi):
Pasinei yako hunoshamisa nesisi ari kubuda usiku kunonakidza yakazara guta, kana chete iripoteredze zuva nezuva muupenyu, iye nguva dzose anoda kutarisa yake zvakanaka. Uye hapana achachengeta wake akatarira nakisisa akafanana yaitaridzika Tools’ nyanzvi Maestro Series wakagadzirwa bhurasho yakatarwa. Yakatarwa zvinosanganisira 12 antibacterial brushes kusanganisira nheyo, Highlighter, ndinotsveruka uye ziso wakagadzirwa brushes. Mumwe bhuracha ane nickel kuifukidza ferrule uye kwezvokufuka rima huni Chibato. The sokusingaitiki kuuya nenzira yakakwana mumupumburu mhaka vane mamwe bhurasho pouches kana hanzvadzi yako anosarudza kuwedzera wake muunganidzwa pave paya.
10. Veduwe Kucheneswa System
Saka hanzvadzi yako ndeyechokwadi wakagadzirwa Artist, asi Artist ose inoda imwe chinhu: mumwe kanivhasi yakachena akapenda zviende. Izvi Philips PureRadiance ganda rokuchenesa hurongwa anoshandisa sonic pulses kubvisa guruva, tsvina uye zvasara ndivanaani apo kuvandudzwa kutenderera. Parachuti anouya peach ruvara uye imwe bhurasho misoro inogona kuwedzerwa kwenguva hubudirire kuvanatsa. Akabatanidza mubhokisi ndimumwe PureRadiance rokuchenesa mudziyo pamwe lithium Ion matochi, imwe nguva bhuracha musoro uye mumwe exfoliation bhurasho musoro. Hanzvadzi yako ichava vanoonga nokusingaperi kana iye anogamuchira chipo ichi chikuru kwamuri, and she will never have to deal with sticky dried-on makeup again.this is one of the favorite for Christmas zvipo hanzvadzi
Veduwe Kucheneswa System
Kana totaura nemamwe uye mudiwa hanzvadzi yako, uchida kumuwana chinhu chinokosha zvechokwadi. ovimba, Pamazita ichi vachakupai dzimwe pfungwa huru pamusoro chii kuwana hanzvadzi yako Christmas chaiwo sezvo iye anoita wako zuva nezuva.
Filed Under: Blog, Christmas Gifts Tagged With: best gift for sister, best sister gifts, birthday gift ideas for sister, birthday gifts for sister, birthday present for sister, christmas gift ideas for sister, Christmas zvipo hanzvadzi, christmas ideas for sisters, christmas present ideas for sister, christmas presents for sister, diy gifts for sister, funny sister gifts, gift ideas for sister, gift ideas for sister in law, gift ideas sister, gifts for a sister, gifts for my sister, gifts for sister, gifts for sister birthday, gifts for sister from brother, gifts for sister in law, gifts for your sister, good gifts for sisters, present ideas for sister, presents for sisters, sentimental gifts for sisters, sister birthday gifts, sister christmas gifts, sister gift ideas, sister gifts, sister gifts for christmas, sister in law gifts, sister jewelry, sister presents, special gifts for sisters, special sister gifts, unique gifts for sister
Christmas Gifts Mazano Kids: Uri kutsvaga Best Christmas Gifts Ideas nokuti Kids nokuti 2016, ipapo uri kurudyi webpage.There chinhu pamusoro Krisimasi uye mutambo muchadenga zvinoita kuti tide nziyo, kutamba mitambo, kunyanya vana uye kungova mafaro. Uye pamusoro matoyi Christmas, Christmas chipo pfungwa kuchatibatsira kuita kuti. Pasinei nezera ravo, vana vanoda Krisimasi uye Christmas matoyi vanoziva richauya nzira dzavo. pashure, kuti matoyi havasi kuti vana.
Isu vana vakura vanoda unakirwe, wo. Tinoda zvimwe zviri kumusoro 10 Christmas chipo mazita. Naizvozvo, chii chiri pamusoro mazita kwatiri ichi Christmas? Chii cha vose (kunyanya vabereki murombo) kukwikwidzana kuti yezororo ichi muzvitoro? Chii inopisa, zvamunokumbira? Chekutanga, pano ari kusarudzwa pamusoro inopisa Christmas matoyi …
Gore negore vanhu vakawanda zvikuru toyi retailers vanozivisa zvavanotenda vachava yakakurumbira Christmas matoyi nokuti gore. Uye kupfuura mukurumbira Christmas zvokutambisa kunogona kuva kwakaoma wanikidza. Saizvozvo, munhu setsa firimu akasunungurwa makore mashoma apfuura nezvenyaya iyi. Jingle All Nzira pamwe Arnold Schwarzenegger.Its zvose pamusoro baba ane zvinoreva Christmas Day wechokwadi vakaona paaiva munhu mhanya kutsvaka inopisa matoyi ari mwaka pamberi Christmas.
Ungasafarira kana anobvumirana rizadze; asi kana mwana wako naye pfungwa kupfeka rimwe pamusoro Christmas matoyi, hapana chimwe achaita. Vana vanoda zvinoitwawo uye uite shamwari dzavo kuita. Vari Marketing hope yomunhu. It rekukwazisa pfungwa zvokutambisa, hapana sero runodiwa; zvigadzirwa chete kubhururuka kubva echiShinto – zvose voga.
A wekambani inoti kuti pane nguva dzose kwezvokudya paKrisimasi, saka zano rake: kana uchiziva kuti unoda vana kana mbudzana ipapo , kuzvitenga mangwanani – ndiko,kana usingadi kuona zviso mwoyo pazuva reKrisimasi.. Kunyange zvazvo zviri anosetsa kuti vemungano baba demented anoedza kuwana mukurumbira matoyi Christmas inogona kutarisa, nditende, chokwadi yokuwana pachako hakusi varaidza kuti mamiriro ezvinhu.
Zvadaro kuti Krisimasi ake zvipo zvakanakisisa 2016 nokuti vana uye hunowanisa vakasarudzwa ndakasvirwa arongwe mhando kunze pano … Just napakati uye vanakidzwe!
1. Rip Rider 360 Vanotsauka Ride On
Ainzi imwe yakanakisisa matoyi vana kuchikoro 2009 nevabereki Magazine, klassiske BigWheel adzokazve chiito zvakare gore rino pakatanga ari Rip Rider 360 Vanotsauka Ride On. Vatasvi makore mashanu uye kumusoro vachadanana sei tricycle ichi Rip Rider 360 kufamba kwemhepo uye kumiganhu downhill uye sei zviri nyore kuwa. The mutasvi zvakasiyana nemotokari uye shure matai tenderera yose nzira kumativi. tricycle This, Kusiyana nowakautangira, ane simbi furemu kusiyana munhu mapurasitiki furemu saka zvinoita kuti kusimba uye unotedza tasva.
Reza Rip-Rider 360 Vanotsauka Ride-On
The iXL 6 mu 1 maitiro Chokwadi 6 vatanhatu mumwe siyana mano uye unouya-software nokuda nechimwe zvikumbiro matanhatu kubva bhokisi. The mafomu nhanhatu dzinosanganisira digitaalinen muverengi, mutambo mutambi, nebhuku rokunyorera, musangano, MP3 mutambi uye pikicha Fafitera. Sezvakanga Vtech VReader, dyidzana iXL System inokurudzira vana vatatu kusvika makore manomwe kuti kudzidza kuverenga uye kuwedzera chakazovapo.
Fisher-Price iXL 6-mu-1 Learning System (pingi)
3. Nerf N-Urayai mumhirizhonga ECS Blaster
akashongedzerwa Zvizere chete clips 6 miseve uyewo nhatu 18 museve clip, ari Nerf N-Urayai mumhirizhonga ECS Blaster Zvichava zvakanaka vana makore masere uye vakwegura emiti nokukurumidza firepower kuti anosungirwa kuti ape iyo kuvapa maawa kunakidza cover.
Nerf CS-18 N-Urayai Elite Rapid Urayai
4. Squinkies Cupcake Chishamiso Bakeshop
The Squinkies Cupcake Chishamiso Bakeshop anogona kuvhurwa kuitira kuti vana vanogona kutamba bhekari naye makeke uye pastries. Chishamiso Bakeshop ane zviduku zvikamu kukuisa arikukachidzwa njodzi vana yaigona makore pasi makore matatu. Saka mugadziri, Blip Toys, zanhi Squinkes Cupcake Bakeshop vana makore mana uye vakwegura. The Squinkies Bakeshop anoshanda nokuchinja uye kuisa mari kupinda mutambo bhatani cupcakes uye kuti Squinkies Cupcake zvakashamisa Bakeshop.
Blip Squinkies Cupcake Chishamiso Bakeshop (Recolor)
5. Imbirai-A-Ma-Jigs!(Christmas Gifts Mazano Kids)
chii chaizvo chiri Imbirai-munhu-ma-jig? tsime, imwe nziyo-munhu-ma-jig inongova nhengo imwe The Imbirai-A-Ma-Jigs! ™ boka vatambi. Uye zita chitoyi wakakodzera
tsananguro. A imbai-munhu-ma-jig duku Dete, squeezable matoyi anenge manomwe nemasendimita refu, kuti “anoimba” kana uchifamba dumbu rake. kunoita benzi? chingava. Asi mafaro? Hapana mubvunzo nezvazvo. Saka kusangana Imbirai-A-Ma-Jigs! ™ kuchinja –munhu akangwara chigadzirwa ane akachenjera zita. Ivepo muchirimo 2010, boka iri offbeat, Visitas vatambi – vakasikwa Mattel raMwari Fisher-Price nokupesana – achaisa kunyemwerera pachiso chako uye kunofadza chero mwana. The Imbirai-munhu-ma-jigs vanovimbisa kuti chimwe chezvinhu dzakakurumbira matoyi pagore.
Mattel The Imbirai-A-Ma-Jigs Duets – Red ne Puppy
6. Rori uye Tractor(Christmas Gifts Mazano Kids)
Mumwe inopisa Christmas matoyi, Motokari uye Tractor ari mana nemavhiri rori kuti anogona kubata mhando dzose mamiriro enzvimbo. Mupepa mapfumbamwe padiki treaded mavhiri uye hombe muviri maviri-rutsoka refu. Kukura chaiyo uku kunoshamisa mitema muchina iri 28.6 masendimita kubudikidza 19.4 masendimita kubudikidza 18.2 zvichiita kuti guru uye zvakanakisisa asi. Akakurudzira kwemakore matanhatu uye kukwira, Motokari uye Tractor kuchangoita akapamba mwana wako pamusoro Christmas mangwanani.
John Deere Sandbox Vehicle 2CV, Rori uye Tractor
Rimwe Hottest kuimba manzwiro ari mumhanzi nyika vanogona kuenda kumba newe nokuda mazororo kuburikidza Justin Bieber Singing Dolls.Justin Bieber Doll Collection kwatova pamusoro 10 Christmas zvokutambisa nyora. Ichava chimwe chezvinhu zvikuru nevanhu matoyi vasikana vane makore matanhatu kusvika 15 makore yezororo iyi.
The Bridge Direct Justin Bieber Kuimba Dolls
8. Kunhuhwa, anyenga marara Truck
Ndakabatana inonakidza Matchbox Big Rig kumadhindindi nemutsara dyidzana matoyi gore rino kunhuhwa, anyenga marara Truck. Vana makore matatu uye vakuru kufanana chokuti kunhuhwa, anyenga marara Truck zviri oversized uye nyore articulated zvikamu kuti kufamba kunhuhwa, anyenga wacho kabhini, Makumbo uye muviri Kutama. Vachawa kudanana exuberant unhu chitoyi ichi uye kwayo kupfuura 90 akangwara zvirevo uye ruzha.
Matchbox kunhuhwa, anyenga marara Truck
9. Bigfoot chikara(Christmas Gifts Mazano Kids)
Fisher-Price Image inotevera Big Foot chikara:Hazvina guru uye takagadzirira nzira yayo mumba mako uye mwoyo mwana wako: ari Bigfoot Monster.Bigfoot anouya upenyu pamwe zvaisanganisira Wireless kure kudzora. Anogona kuva kotsira, vakatsamwa, kufara, kana wakasuruvara. Bigfoot anogona kufamba, taura, tsenga, burp uye kukanda bhora. Achaita kuti uzive kana wagadzirira bhora, kutaura mashoko akadai “tamba”; andhe anogona kukanda bhora zvokungonakidzwa kunyange zvakawanda. Bigfoot chikara chiito nhamba akadzidza nzira dzake, uye nguva dzose anoda munhu akapfava “pamusoroi” kana iwe burp inobuda. hamungambovi kufanana naye kana iye atsamwa, asi kufanana Fisher-Price Fungidzira inotevera BIGFOOT chikara.
10.Kung Zhu Hamsters(Christmas Gifts Mazano Kids)
Kung Zhu Hamsters vari kuenda kuva mukuru mwaka uyu sezvo avo vamutangira, ari Zhu Zhu Pets vakanga guru gore rapera; uye zviri nyore kuona kuti nei. Saizvozvo, kwavakatoita pamusoro 10 Matoyi inopisa nyora ichi yezororo. Kusiyana akanaka uye cuddly Zhu Zhu hamsters, Kung Zhu Battle Hamsters vanotyisa kurwa michina. Vane edgier chimiro ne giya kurwa uye kurwisana nezvombo. Kune mhando mbiri akasiyana Kung Zhu Battle Hamsters, ari Ninja Warrior boka Unokosha Forces boka uye. boka rimwe chete muchawana kana vachida kushanda pakupopotedzana.
11. Love House(Christmas Gifts Mazano Kids
Uchaona zvinhu ukaona musha inofadza mhuka idzi mune zvakaitika Calico Critters Townhouse. The townhouse angafanirwa pamwe makamuri mana vapenyu, kudya kana kuzorora. Gone vana vemazera vatatu uye pamusoro, ari Calico Critters Townhome anopa okusika kwavaizoenda chipi mwana. The Critters Townhouse ndiyo yakanaka chokutambisa yave kumativi kwenguva refu. The Calico Critters inogona kutengwa mune unobatsira kana mhuri. Matoyi aya vanosanganisira nemabheya, imbwa, matatya, katsi, makonzo, tsuro uye zvakawanda nyangarara. Unogona kuponesa kwenyu dzinodiwa zvikuru kwoushamwari-ropa rechiJudha chairo mhuri mhuka Calico Critters Townhome tenga.
12. Cuponk!(Christmas Gifts Mazano Kids)
Ku chii? Cuponk! Zviri mutambo anogona kuridzwa nevanhu vemazera ose, kunyange zvazvo mugadziri rakarumbidza zera shanu uye vakura; zvino vakawanda vava sezvo yezororo iri pedyo. Chakaitwa Hasbro, pane chaizvoizvo matatu shanduro dzakasiyana-siyana mutambo uyu: ari Cuponk! – Gorillanator, Cuponk! – El Campeon uye Cuponk! – Regai R.I.P mitambo. Kana uchida kuwana vana kubva TV kana kombiyuta kwechinguvana.
Cuponk! – Gorillanator pamwe Disaster
13. Dance Star Mickey(Christmas Gifts Mazano Kids)
Kutora tsika dzavo yokusuma dzakakwirira itsva kuwedzera Dance Star Mickey kuti mhuri Fisher Price matoyi, Fisher Price ane mumwe mukundi ichi yezororo. Dance Star Mickey yatova pamusoro 10 pamazita inopisa Christmas matoyi. It ndiyo vakagarwa Mickey Mouse chitoyi nokusingaperi uye rakagadzirirwa vana kubva 18 Makore mwedzi mitanhatu okuberekwa. Fisher Price Dance Star Mickey anofamba, hurukuro, anoimba uye vezvehondo zvakasiyana-siyana grooves itsva. Kune mumwe dzinokwana pamakwara nhanhatu, kusanganisira nziyo “Zunzai Your Groove Thing” uye “Get Up Offa Kuti Thing”, uyewo nhamba dzakasiyana vachitamba kusanganisira yakakurumbira moonwalk waMikaeri Jackson.
Dance Star Mickey Fisher-Price Disney raMwari
The Leapster Explorer Learning Game System Isa Handheld uchitamba mutambo device chakagadzirirwa richikura pamusoro unyanzvi kuti vana vadzidze kuchikoro uye anopa inonakidza nzira yokuti kuchinja zvimwe uye kudzidza chimwe chinhu chitsva uye zvinofadza ose zuva. It akasikwa LeapFrog kuti vana 4-9. Pamwe Leapster Explorer, Vana vanogona kudzidza kwavo kufarira vatambi vakaita Dora ari Explorer uye The Penguins vokuMadagascar. The mitambo kudzidzisa unyanzvi hwakadai masvomhu, kuverenga, phonics, jogirafi, sainzi, mumhanzi uye LeapFrog Leapster Explorer Learning Game System (Girinhi).
15. Spy Net Video Watch(Christmas Gifts Mazano Kids)
The Spy Net Video Watch chaicho kushanda vhidhiyo kamera uye maikorofoni anogona kunyora kusvika 20 maminitsi Video uye ruzha. The chatingatevedzera kurekodha uye playback ari hazvishamisi rakanaka inobva kukura chigadzirwa. The Spy Net Secret Mission Video Watch, unogona kutora mifananidzo sezvo nguva zvakafa mifananidzo. The mugadziri haisi vana pasi pemakore yakarumbidza makore masere. Pamu yepamusorosoro shora zvinhu, zvakakurumbira kuti chaizvoizvo inomira Spy Net: Secret Mission Video Watch.
shora Net: Secret Mission Video Watch
16. Hot Wheels R / C namano akatasva Racing Car
Vana makore masere uye vakura vachawana Hot Wheels R / C namano akatasva Racing Car zvikurukuru pamusana pakukurumidza, portability uye nyore. Saka zvakare, Hot Wheels ikarova musha run ne Kumbofungatira itsva yake, homwe kadikidiki motokari – panguva chaiyo dzemazororo. The Hot Wheels R / C namano akatasva Racing Car munhu-padiki matatu Mini Mujaho motokari vane pazvirugu uye wemishonga anaro wokutepfenyurisa / motokari ari kure. Most kure kudzora motokari ari muchikwata ichi rine yoga sizeable RC wokutepfenyurisa; uye ndizvo zvinoita kuti namano anotasva Racing Car kudaro itsva R / C zvokutambisa.
Hot Wheels R / C namano akatasva Racing Car – Tsvuku
Ndinovimba imi muchida dzakanyorwa zvinhu zvose pasi Best Christmas Gifts Ideas 2016 nokuti Kids
Mbudzi 15, 2016 By StellaMarice Leave a Comment
Filed Under: Christmas Gifts Tagged With: 10 best movies of all time3, all christmas movies, best christmas films, yakanakisisa Christmas mafirimu, best movies of the 2000s, christmas classic movies, christmas films, christmas films 2013, christmas films list, christmas movie classics, christmas movies, christmas movies 2015, christmas movies 2016, christmas movies for kids, christmas movies hallmark, christmas movies list, christmas movies online, christmas movies to watch, classic christmas movies, family christmas movies, good christmas films, good christmas movies, kids christmas movies, list of 2015 christmas films, list of 2016 christmas films, list of christmas movies, old christmas movies, romantic christmas movies, the best christmas movies, the christmas list movie, this christmas movie, top 10 christmas movies, pamusoro 100 Christmas movies, top 100 movies 2016, top 100 movies of 21st century, top 100 movies of the 2000s, top christmas films, top grossing movies of all time, top movies this week, top rated movies 2015, top ten christmas movies, watch christmas movies, xmas films, xmas movies